सर्वस्व गुमाएका पत्नीपीडितको प्रश्न- "समाजले पुरुषको आँसु किन देख्दैन ?" (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
6150262 370500 3049807 2729955
140161176 219
सर्वस्व गुमाएका पत्नीपीडितको प्रश्न- “समाजले पुरुषको आँसु किन देख्दैन ?” (भिडियो सहित)
७ आश्विन २०७६, मंगलवार ११:४२
महिला र पुरुष समान हुन् तसर्थ हक, अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई बराबर हुनुपर्छ। समतामुलक समाजमा महिला वा पुरुष कोही पनि कसैबाट पीडित हुनु हुँदैन । आफ्नो हक अधिकार सदुपयोग गर्दा अरुको हक अधिकार हनन हुनु हुँदैन। नेपालमा कयौ पतिपीडित महिलाहरु छन्, कयौं पत्नीपीडित पुरुषहरु छन् । सामान्यत: पतिपीडित महिलाहरु न्यायका लागि खुलेर बाहिर आएका छन् तर पत्नीपीडित पुरुषहरु भने आफ्नो मान मर्यादामा आंच आउने डरले सार्वजनिक हुन चाहदैनन्। तर झापाका तेजबहादुर भण्डारी भन्छन्- “सहनशीलताको सिमा नाघेपछि सार्वजनिक नभएर पनि भएन।” उनी थप्छन्- “श्रीमान पनि पीडित हुनु भएन, श्रीमती पनि पीडित हुनु भएन।” सहनशीलताको सिमा टुटेपछि जो कोही पनि आफ्नो न्यायका लागि मुख खोल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
समाजबाट अपहेलित हुने डरले सकेसम्म मिल्ने र सहने कोसिस गर्दागर्दै पनि झन् झन् पीडित बन्नु परेपछि उनले केन्द्रबिन्दु मिडियामार्फत पहिलोपटक आफ्नो पीडा पोखेका हुन्। माया र विश्वासले सर्वस्व सुम्पेका भण्डारीले उनै पत्नीबाट कुटपिट, गाली बेइज्जती मात्रै होइन मुद्धा मामिला पनि झेलेका छन् । झापामा उनको करोडौको सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्ती उनले अफगानिस्तानमा नेटो सेनासंग काम गरेर पठाएको रकमले जोडेको उनको दावी छ। तर, उनी अहिले काठमाडौँको सडकपेटीमा तरकारी बेच्छन् ।
श्रीमतीबाटै चरम शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडा भोगेका भण्डारीले हामीसंग भिडियो अन्तर्वार्ता दिएका छन्। थप सामाग्री उनकै मुखबाट।
Tej bahadur bhandari
Prevयसरी हेर्नुहोस् कक्षा ११ को नतिजा
म्ह पूजा र न्हुँ दँ कहिले ? मंका खःल भन्छ १२ गते, पञ्चाङ्ग समिति भन्छ ११ र १३ गतेNext
भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक समावेश
ग्यास लिक हुँदा मकवानपुरको थाहानगरमा घर जलेर नष्ट
जेठ ३२ गतेसम्म लम्बियो लकडाउन, विमानस्थल असार १३ गतेसम्म बन्द
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका सातौं व्यक्ति: भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बास, एक्कासी बेहोस
एमसीसीको काम रोक्ने निर्णयदेखि अमेरिकाले डब्लूएचओ छोड्नेसम्म (भिडियोसहित)
'कूटनीतिक वार्तामार्फत भूमि फिर्ता गर्छौं' : मन्त्री अर्याल
कोभिड-१९ : सावधान ! बढ्दो छ सङ्क्रमणको गति
पाँचखाल बृहत् खानेपानीको ठेक्का : नेपाली र चिनियाँ कम्पनी छनौट
संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय